Marika sy Marketing amin'ny atiny: Tandremo ny fanodikodinana | Martech Zone
Alarobia, Novambra 21, 2012 Alarobia, Novambra 21, 2012 Marty Thompson
Michael Brito, ny filoha lefitra lefitra misahana ny fandraharahana ara-tsosialy ao amin'ny Edelman Digital (ary manodidina ny atody tsara), vao tsy ela akory izay nanoratra momba ny marika roa izay manova am-pahavitrihana ny ankamaroan'ny fifantohan'izy ireo amin'ny marketing ho foibe media.
Mampahery ahy fa ireo mpanafika orinasa voalohany dia mivoatra ny paikadim-barotra momba ny votoatiny ho lasa sehatra fandraisana anjara feno kokoa. Mifanindran'ity fiovana ity, misy ihany anefa ny fironana ara-barotra hafa izay tokony harahintsika amin'ny mason-tsivana fa tsy afangaro amin'ny haino aman-jery orinasa fanaovan-gazety.
Misy fironana goavana mitranga eo amin'ny sehatry ny varotra, ary manana singa roa izy io. Ny voalohany dia ny resaka mitohy momba ny zavatra rehetra content marketing, izay kosa, amin'ny lafiny sasany, ampiarahana amin'ny hevitry ny fitantarana mahomby.
Ny singa faharoa dia ny fihevitry ny fanaovan-gazety, fa ny marika dia mety ho lasa mpanome haino aman-jery, tsy ny atiny sy ny tantara mifantoka amin'ny vokatra na serivisy an'ny marika ihany, fa mihetsika ho toy ny mpampahalala vaovao. Ny orinasan-tserasera dia eo ambanin'ny ozin'ny tetezamita manaitaitra ny haino aman-jery nentim-paharazana, sy ny tena fahaleovantenan'ny mpanao gazety, mankany amin'ny sehatra nomerika. Tampoka teo dia mpanao gazety ny olon-drehetra (tsy misy dikany izany).
Coca Cola tato ho ato lohateny lehibe miaraka amin'ny fanerenany hametraka ny tranokalan'izy ireo ao anaty magazay ho an'ny mpanjifa, natosiky ny mpanoratra tsy miankina 40, mpaka sary ary hafa. Ankehitriny dia lasa mahaliana ny ampahany noho ny fandraisan'izy ireo izany hoe "loharanom-baovao marim-pototra", dia hanokana fotoana ivoho amin'ny tsanganana mpijery hevitra izay mety tsy mifanaraka amin'ny votoaty ankafizin'ny marika izy ireo.
Eto aho no manamarika, ary maningana. Ny marika amin'ny tranga maro ankehitriny dia mahatakatra fa raha te hifaninana am-pahombiazana dia mila mandoa molotra farafaharatsiny izy ireo hatramin'ny olana manomboka amin'ny faharetan'ny tontolo iainana, hatramin'ny zon'olombelona. Ny ampahany amin'io fanoloran-tena amin'ny andraikitra ara-tsosialy io dia midika fa ny orinasa iray dia tokony hijery akaiky ny orinasany, ary hiasa hanatsara ny toerana misy ifandraisany amin'ny fomba fanaon'izy ireo. Raha jerena ireo olana taloha nananan'i Coca Cola tany India sy Afrika izay nanjary olana lehibe ny fitantanana rano dia tsy nanantena ny hisian'ny ezaka be dia be aho hita tao amin'ny tranokala Journey. Diso anefa aho.
Coca Cola dia nanokana ezaka be dia be tamin'ny firesahana ity olana ity, ary koa ny fonosana maharitra, ny fiantraikan'ny fambolena, sns. Mamporisika anao aho hamaky ny Tatitra maharitra maharitra 2012.
Ity dia fanombohana tsara, ary deraiko i Coca Cola noho ny fampidirany izany vaovao izany. Saingy tsy izany fanaovan-gazety. Tsy tokony afangaro mihitsy isika fitantarana tantara miaraka amin'ny fitantaran'ny ray aman-dreny sy ny zanany, ny tantara izay vakiantsika sy ifanakalozanay hevitra ao amin'ny toeram-pivavahana, ny tantaran'ny fianakavianay.
Dingana manaraka tsara ho an'i Coca Cola dia ny fametrahana sehatra iray izay misy ireo olana ireo eo alohany sy eo afovoany, izay ahafahan'ny vondron'olona mpanjifa, mpikatroka ary mpifanolo-bodirindrina mifanerasera. Hatereko ihany koa fa ny ombudsman mpanjifa dia ho mpanamboatra maharitra ao amin'ity fiarahamonina ity, ary omena azy ireo ny fahaleovan-tena mba hanaintaina indraindray.
Raha mieritreritra fotoana fohy ireo orinasa fanaovan-gazety afaka misy ao anatin'ny faritry ny -barotra, mametraka fotsiny ny tenany eo afovoan'ny tsingerin'ny hype manaraka izy ireo.
Tags: fanaovan-gazetyContent Marketingafa-po paikadynatrehin'ireofitantarana
21 Novambra 2012 à 11:47
Wow Marty - nofantsihanao izany. Heveriko fa misy teboka manetriketrika miaraka amin'ireo marika izay mino fa izy ireo no ivon'ny fifantohana tsy miangatra. Fantatry ny mpamaky foana fa mamaky fitaovana ara-barotra izy ireo! izany no antony tsy maintsy ananan'ny orinasa ny paik'ady foibeny sy ny paikadin'ny fanentanana!
21 Novambra 2012 à 2:02
Lahatsoratra tsara Marty, saingy manahy momba ny fifanakalozan-kevitra momba ny orinasa toa an'i Coke aho izay nanao an-kitsirano ny zava-drehetra tsy mety raha ny amin'ny… saika ny zava-drehetra ho an'ny lasa… tsara ho mandrakizay.
21 Novambra 2012 à 2:34
Nanakiana azy ireo ihany koa aho teo aloha, saingy misy ny mety hisian'ny kisendrasendra ao anatiny, raha raisina ho matotra ny foto-kevitry ny asa fanaovan-gazety momba ny orinasa. Heveriko fa ny fanontaniana dia ny hoe mety hitarika ho amin'ny fanovana anatiny miadana ve ity karazana ezaka ity, sa ho gazetiboky an-tserasera hafa fotsiny. Ary raha mbola eo izy ireo dia avereno ireo tavoahangy 6.5 ounces taloha azo averina, ary ampiasao siramamy tena izy.
22 Novambra 2012 à 9:22
Marty – Hitako ity lahatsoratra HBR ity miresaka momba ny fiovan'ny Coca-Cola ihany koa – mahaliana ny fandraisana azy. http://blogs.hbr.org/cs/2011/04/coca-colas_marketing_shift_fro.html
30 Novambra 2012 à 1:11
Tena ilaina ny fananan'ny ankamaroan'ny orinasa madinika pejy iray
manangana ny marika, mifandray amin'ny mpanjifa sy ny mpankafy, ary ny fikojakojana
tsara PR. Raha tsy misy ny fisian'ny media sosialy, ny orinasa iray dia azo avela ao ambadik'izy ireo
mpifaninana, indrindra ireo izay nisafidy ny hifikitra tanteraka amin'ny media sosialy.
30 Novambra 2012 à 5:04
Tsy manaiky tanteraka aho, satria mino aho fa ny marika dia afaka manome fepetra sasantsasany amin'ny votoatiny, indrindra raha miorim-paka amin'ny fampiasana izany fa tsy fampiroboroboana. Ara-kolontsaina fotsiny dia tsy ao amin'ny ADN ny ankamaroan'ny marika ny manao izany. Lahatsoratra mahafinaritra Marty. Nieritreritra aho.
Dec 3, 2012 amin'ny 10: 34 AM
Misaotra Jay. Miverina tsy tapaka amin'ny mantra anao amin'ny fanampianao aho, ary mety ho sarotra indraindray ny hifindra amin'ity toe-tsaina ity amin'ny marketing. Hitanay avy amin'ny Edleman Trust Barometer fa ny mpanjifa dia mametraka fahatokisana bebe kokoa amin'ny mpiara-mianatra aminy, ny faribolan'izy ireo ara-tsosialy, ary kely kokoa amin'ny zavatra ataon'ny orinasa. Mino koa aho fa afaka manomboka manova ireo fomba fijery ireo ny fikambanana, saingy dingana miadana izany. Ireo olona toa an'i Tom Foremski no lohalaharana amin'ity tontolo vaovao feno herim-po amin'ny asa fanaovan-gazety an'ny orinasa ity, mifanohitra amin'ny fampitam-baovaon'ny orinasa. Ny taona 2013 dia ho taona lehibe ho an'ny ezaka amin'ny fomba hizoran'ny orinasa amin'ny lalana marefo amin'ny fitokisana.